Sithi huntshu kubafundi bethu | News24
Sithi huntshu kubafundi bethu
Ukwanda kwaliwa ngumthakathiUmhleli weCity Vision uThulani Magazi kutshanje uphume iphulo lokubuyekeza abafundi abathe gqolo ukuxhasa iphephandaba kunye namaphulo alo. Ngentla ufotwe noBuyiswa Magqaza, waseHarare.
Ngabafundi abahlanu be City Vision abathe bawongwa ngenkxaso yabo kwiphulo lethu lesiXhosa.
Esi sihlanu sithe sabonisa intembeko nenkxaso kususela ukumiselwa kweli phulo kunyaka ophelileyo, ngokuthi sithi gqolo siphendula imibuzo yezaci namaqhalo.
Umhleli wephephandaba uThulani Magazi uthi injongo yeliphulo kukubuyisa nokuqaqambisa ulwimi lwesiXhosa.
“IsiXhosa sesinye zeelwimi ezityebe kakhulu, kwaye sintsokothile. Yinto ekumele siziqhenye ngayo, yiyo lonto sithe gqolo ngeliphulo, kwaye liyasibonisa ukuba baninzi abantu abazidlayo ngolwimi lwabo.” utshilo esothulelwa umqwazi bonke abathe bawongwa.
Ukanti ukwaqhwabele izandla bonke abafundi abathe gqolo benikezela ngenkxaso kweli phulo. “Kwezinyanga zidlulileyo sibone ukukhula okungummangaliso kweli phulo, ntoleyo isenza sibe nelunda. Sithi huntshu, ningadinwa,” utshilo.
Ukanti abayivali imilomo abafundi abathe baxhamla.
U-Buyiswa Magqaza, waseHarare, uhlomle wenjenge: “Into esikhuthazayo ukuba sisithande isiXhosa sityebile, lulwimi esalincanca ebeleni. Mve umXhosa xa athi ‘zingasuzelana zityebile’. Thina sisa abantwana bethu uba bayofunda isilungu de umntwana angakwazi nobulisa ngesiNguni masizingce maXhosa.”
Ukanti yena uZukiswa Mdunyelwa, waseMakhaza, uyiqhwabele izandla iCity Vision: “Bantu baseKapa ndicela simsele iliso uCity Vision ngakumbi ulutsha. U-City Vision akapheleli ukukhangela nje indaba kuphela, unayo nenkxaso ebantwini,” utshilo.
Omnye umfundi uNomathemba Tabata, wase Site B, uthe umnceda kakhulu umhlathi wamaqhalo ne zaci kuba athi ancede abazukulwana bakhe kwaye anceda naye buqu. “Ndiyakuthanda ukufunda ingakumbi incwadi zesiXhosa. Lo mhlathi usikhuthaza kakhulu ukuba ulwimi lwethu silwazi,” utshilo.
Ukanti yena uZoleka Njoli, wase Site B, uthe lo mhlathi uluncedo ekuphuhliseni nasekukhuthazeni ulwimi lwesiXhosa: “Lo mhlathi ubaluleke kakhulu kum nanjengamXhosa. Amaphephandaba awayebhala ngesintu asilahla isintu abhenela kwelasemzini kuloko ndisoloko ndihlomla,” utshilo.
U-Anelisa Beja, wase Nyanga, uthe ufunda lukhulu kwi City Vision, waqhwabela iphulo lesiXhosa izandla. “Kweli phulo lesiXhosa ndithanda imfundiso yezaci namaqhalo kwaye inikisa umdla, ndifunda lukhulu ngoyendibhala ndibone impazamo zam ndilungise apho ndisilela khona,” utshilo. “Ndingathi nditsalwa kuba ndibona uninzi lwethu thina bantu batsha isiXhosa siye singasithatheli ngqalelo kanti lulwimi lwethu lwenkobe kumele ukuba sigcobe xasibona liphuhliswa ukuze nabalandela emveni kwethu bazeke mzekweni,” utyatyadule watsho.V Funda lukhulu kwikhasi lesibini.